Zimbabwe frees some inmates to reduce COVID-19 risk in jails | News
House GOP set to oust Trump critic Liz Cheney from ...
Published at 20:50 on 17 April 2021 Updated: 21:00
Female prsioners wave goodbye to their fellow inmates following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
A prison guard directs prisoners following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
Prisoners walk out of prison following their release at Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
Prisoners are briefed about the dangers of the coronavirus following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
A female prisoner is seen inside the prison premises at Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
Prisoners wait for transport following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
Prisoners wait for transport following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare,Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
Police in Thailand arrest 3 journalists who fled Myanma ...
Voit activated by Yankees after recovering from knee su ...
Kings complete sweep of Thunder, still hope for playoff ...
Terence Davis matched his season h ...
Manny Machado homered and tripled ...